Ceel - Wikipedia
Ceel ( ) (sidoo kale loo yaqaano Il biyood) waa god la qoday oo hoos u dheer oo laga helo biyo, shidaal, gaas ama khayraad dabiici ah. Ceelasha biyaha ayaase aad u badan markii loo eego kuwa dareeraha kale laga helo.
Ceel, wadanka Maali
1 Ceelasha biyaha
2 Ceelasha Naftada iyo Gaaska Dabiiciga ah
3 Booska Ceelasha
4 Ceelasha Kitaabka quduska ah
Ceel qadiim ah, Bhaini Sahib, Ludhyana , Punjab , Hindiya
Ceel buuro ku hoos yaal
Biyaha dhulka hoostiisa ku jira ee noqda Il-biyood markii la qodo waxaa loo yaqaan biyaha hoose, biyahaas ayaa ka yimid roobka dhulku gursaday oo si tartiib ah hore dhulka u galay, ilaa ay ka gaareen keydka biyaha hoose, waana meel ay carro iyo dhagaxaani ja buuxaan, waxaa jira dhul biyihiisu dhowyihiin waana meelaha iska qoyan mar walba.
Il-biyood dhulka hoostiisa ah oo lagu helay riig, lagana qoday oogada dhulka ilaa oogada biyaha hoose, biyahaa waxa markaa loo soo saaraa ama loo soo afuufaa oogada dhulka. Haddii ceel ka hoos maro oogada biyaha hoose xilliga qoyaanka, oo aanu aad hoos uga dhicin oogada biyaha hoose ee joogtada ah, wuxuu biyo yeelanayaa xilliga qoyaanka, haddii uu gaaro oogada biyaha hoose ee joogtada ah, dabadeed weligii biyo ayuu yeelanayaa.
lama degaanka qalalan ayaa la arkaa inay biyihiisu aad u fogaadaan ayna gaaraan ilaa boqolaal mitir, waxaana markaas lagama maarmaan noqonaya in ceel la qodo oo beeb la galiyo iyadoo la adeegsanayo riig si uu biyaha u sii tuuro.
Ceelasha Naftada iyo Gaaska Dabiiciga ahEdit
Naftada iyo Gaaska Dabiiciga ah ayaa labaduba ka fudud biyaha, saa daraadeed way soo caariyaan markay helaan dusitaan, hase yeeshe Naftada iyo Gaaska Dabiiciga ayaa burqada lakab dhuleed adag hoostiis oo ka samaysan dhagaxaan, ceelasha ayaa dhex jeexaya ilaa laga gaaro Naftada iyo Gaaska Dabiiciga si banaanka loo keeno, ceelasha Naftada iyo Gaaska Dabiiciga ayaa hadba meel laga qodaa si loo helo ceelka, markii la hiiyo ka dib baa la keenaa warshadii soo saari lahayd.
qodida Naftada iyo Gaaska Dabiiciga ayaa u baahan khibrad iyo aqoon heersare ah taasoo la soo baranayay tobaneeyo sano, waxayna keensataa qarash badan.
In la xadido meesha uu ceel noqonaysa ayaa keensanaysa darajo sare oo khibradeed, sidaa daraadeed dhul aqoonka, injineerada ayaa garan kara meelahaasoo kale nooca iyo kaydka biyoodka, Naftada ama Gaaska Dabiiciga ah inta uu le'egyahay.
Ceelasha Kitaabka quduska ahEdit
Ceelkii Muuse, oo ah meeshii Nebi Muuse kula kulmay toddobadii gabdhood ee Jetra, oo kii ugu weynaa ee Sefora uu guursaday
Rebeqah geeli inay waraabiso diyaar bay u ahayd (Rebecca iyo Eliezer oo uu qoray Bartolomé Esteban Murillo, qarnigii 17aad.)
Intii u dhaxaysay Oktoobar iyo Abriil, roob ayaa ka da’ay Israa’iil mararka qaarna wuxuu soo daadiyaa dooxyada durdurrada ah. Xilliga xagaaga, si kastaba ha ahaatee, badi “webiyadan” ayaa engega, waxaana dhici karta in roobab aysan helin bilo. Sidee bay dadku wakhtiyadii Kitaabka u haysteen biyo joogto ah? Waxay xaliyeen dhibaatadan iyaga oo jaray jidadka buuraha dhaadheer oo roobabka jiilaalka u jiheeyay godadka dhulka hoostiisa, ama ceelasha. Saqafyada saqafka ayaa si ku filan u dhaadhacay si ay biyaha roobka ugu jiidaan ceelashaas. Qoysas badan waxay lahaayeen ceel u gaar ah, oo ay biyo ka dhaansadaan si ay harraadkooda uga baxaan, sidoo kale waxay ka faa’iideysteen ilaha dabiiciga ah. Dhulka sare, roobka jiilaalka ayaa dhulka ku soo qulqulaya ilaa uu gaaro lakabyada dhagaxa ah ee aan la mari karin, oo uu ku socdo ilaa uu ka soo muuqdo ilo. Tuulooyinkaas waxaa badanaa laga dhisay meel u dhow il (Cibraaniga, en) waxaa soo jeedinaya magacyada meelaha sida En-shemesh, En-rogel, iyo En-gedi. Yeruusaalem dhexdeeda marin biyood ayaa laga qoday dhagaxa adag si ay biyaha ilku u soo galaan magaalada. Meel aan lahayn ilo dabiici ah, ceel (Cibraaniga, beʼerʹ), sida kii Bi'ir Sheba, ayaa quusay si uu u garaaco biyaha dhulka hoostiisa. Qoraaga André Chouraqui wuxuu xusayaa in “xalka farsamo [reer binu Israa'iil] ay heleen qaddar amar xitaa maanta.”.
↑ Rebeqah Waxay Doonaysay Inay Yehowah ka Farxiso
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceel&oldid=219120"
Last edited on 11 Oktoobar 2021, at 14:25
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Oktoobar 2021, marka ee eheed 14:25.